*နယူးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ * - Asset Encumbrance: Was ist zu beachten? - နောက်ဆုံးရသတင်းများ 24
*နယူးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ * – Asset Encumbrance: Was ist zu beachten?
June 13, 2018 စာနယ်ဇင်းဖြန့်ချိ ကွန်ပျူတာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးသတင်းအချက်အလက် 0
ကျွန်ုပ်တို့၏နှီးနှောဖလှယ်ပွဲကိုသင်ကြား Alia လေ့. in den Bereichen Diversifikation von Refinanzierungsquellen, Basel III- und MaRisk-Anforderungen, Liquiditätssteuerung und -monitoring mit ILAAP.
24.10.2017 Frankfurt am Main & ဟမ်းဘတ်
08.11.2017 မြူးနစ် & ဘာလင်
+ S က&P Tool “Liquiditätspreis-Simulator”
+ S က&P Tool Basel III-Simulator für die optimale Bilanzstruktur gemäß CRD IV und CRR
အဆိုပါ S က&P ကို ​​Unternehmerforum AZAV မှအသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်, E-Cert နှင့် Din 9001:2008.
ဥရောပ ESF အဖြစ်ဒေသဆိုင်ရာရန်ပုံငွေအဖွဲ့အစည်းများအနေဖြင့်ရန်ပုံငွေရှာခြင်းဖြစ်နိုင်. သင်ကအရည်အချင်းပြည့်မီစံရလိမ့်မယ်.
အဆိုပါနှီးနှောဖလှယ်ပွဲအတွင်းသင်စိတ်ဝင်စားစေခြင်းငှါ? ကျွန်တော်တို့ကို e-mail ကိုပို့ပါဒါမှမဟုတ်တိုက်ရိုက်အပေါ် log အွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်းပုံစံ ဒါမှမဟုတ်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲမှက e-mail ဖြင့်.
လျ. +49 89 452 429 70 - 100
E-Mail က: service@sp-unternehmerforum.de
S က&P ကိုစီးပွားရေးဖိုရမ် GmbH သည်
ဖက်စ် ..: 089 4524 2970 299
ဝဘ် ..: http://www.sp-unternehmerforum.de
အီးမေးလ်က : service@sp-unternehmerforum.de
အဆိုပါ S က&P ကိုစီးပွားရေးဖိုရမ်ခဲ့သည် 2007 စတင်တည်ထောင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများဖောက်သည်တစ်ဦးအယူအဆအပေါ်အခြေခံပြီး:
100 Seminarthemen, 13 လက်မှတ်သင်တန်းများ, အိမ်သူအိမ်သားလေ့ကျင့်ရေး, 500 Seminartermine, 20 တောမှအတွေ့အကြုံရှိစပီကာ.
သင့်ရဲ့အားသာချက်လက်တွေ့တွင် Secure. S ကနှင့်တိုက်ရိုက်ဘွတ်ကင်လုပ်ရန်&: P!
နှီးနှောဖလှယ်ပွဲသည့်အကြောင်းအရာများကအောက်ပါ www.sp-unternehmerforum.de ကိုကြည့်ပါ:
> နည်းဗျူဟာ & စီမံခန့်ခွဲမှု
> မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ & ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်စာရေး
> စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း & တိုးတက်ရေး
> ခေါင်းဆောင်မှု & လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း
> ရောင်းအား & စျေးကွက်ရှာဖွေရေး
> စာရင်းကိုင် & ထိန်းချုပ်ခြင်း
> စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း & ငွေဖြစ်လွယ်
> rating & ဘဏ်ဟောပြောပွဲ
> အကူအညီ & Office ကိုစီမံခန့်ခွဲမှု
> စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုအကောက်ခွန်တန်ဖိုးသတ်မှတ်မည် & ဆက်ခံ
> Depot A-စီမံခန့်ခွဲမှု
> Solvency II ကို
အဆိုပါ S က&P ကို ​​Unternehmerforum AZAV မှအသိအမှတ်ပြုခြင်းဖြစ်သည်, မာခ်က ISO Din 9001:2008 နှင့် E-Cert.
> သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းစီမံခန့်ခွဲဒါရိုက်တာများ (S က&: P)
> သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းအရာရှိချုပ် (S က&: P)
> လက်မှတ်ရငွေကြေးခဝါချမှုအရာရှိချုပ် (S က&: P)
> သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းလေးစားလိုက်နာအရာရှိချုပ် (S က&: P)
> လက်မှတ်ဆက်သွယ်ရေး & ခေါင်းဆောင်မှု (S က&: P)
> သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းအန္တရာယ် Controller & ဘဏ္ဍာရေးမှူး (S က&: P)
> သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း HR မန်နေဂျာ (S က&: P)
> သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းစီမံခန့်ခွဲမှုကူညီစောင့်ရှောက်ရေး (S က&: P)
> သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းစီမံကိန်းကို Manager ကို (S က&: P)
> သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းအရောင်း Manager ကို (S က&: P)
> သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းအန္တရာယ် Manager က (S က&: P)
> သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဒါရိုက်တာ (S က&: P)
> သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းယ်ယူခြင်း Manager ကို (S က&: P)
ဝဘ် ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
မော်ကွန်းတိုက် လကိုရွေးချယ်ပါ June 2018 (387) May 2018 (713) April 2018 (721) မတ်လ 2018 (735) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2018 (755) ဇန္နဝါရီလ 2018 (757) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (645) နိုဝင်ဘာလ 2017 (805) အောက်တိုဘာလ 2017 (760) စက်တင်ဘာလ 2017 (674) သြဂုတ်လ 2017 (690) ဇူလိုင်လ 2017 (314) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2017 (1)
အဖြစ်အပျက် (76) ရှယ်ယာ (155) ဘာလင် (106) လက်ကျန်ရှင်းတမ်း (68) ကုန်စည်ဒိုင်-TV ကို (99) လိုက်နာခြင်း (68) ထိန်းချုပ်ခြင်း (88) ဒေတာလုံခြုံရေး (63) ဒစ်ဂျစ်တယ် (150) အဖိုးတန်သတ္ထု (86) ဘဏ္ဍာရေး (104) ခဲ (65) ခေါင်းဆောင်မှု (93) စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစနစ် (101) ငွေကြေးခဝါချမှု (68) စီမံခန့်ခွဲမှု (124) ကျန်းမာခြင်း (75) ရှေ (514) ဟမ်းဘတ် (66) ဟောင်ကောင် (79) ဟောင်ကောင်ကုန်သွယ်ရေးဖွံ့ဖြိုးမှုကောင်စီ (HKTDC) (78) ဟော်တယ် (68) အိမ်ခြံမြေ (66) အိုင်တီ (86) ကနေဒါ (223) Kobalt (60) ဆက်သွယ်ရေး (148) ကွေးနီ (206) ချစ်ခြင်းမေတ္တာ (136) ငွေဖြစ်လွယ် (75) Liquiditätssteuerung (74) စီမံခန့်ခွဲမှု (68) စျေးကွက်ရှာဖွေရေး (63) မက္ကစီကို (73) မြူးနစ် (66) နီဗားဒါး (124) rating (75) Rohstoff-TV ကို (85) ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများ (131) ငှေ (410) Swiss Resource (63) ရာထူး (129) ရောင်းအား (70) စီးပွားရေးကို (71) Zink (78)